Golaha deegaanka Minneapolis ayaa isku raacay inay siiyaan qoyska Floyd lacag magdhow ah… – Hagaag.com
Golaha deegaanka Minneapolis ayaa isku raacay inay siiyaan qoyska Floyd lacag magdhow ah…
Posted on 13 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Kulan ay isugu yimaadeen golaha deegaanka Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa waxa ay si aqlabiyad leh isugu raaceen inay siiyaan qoyska George Floyd oo ahaa nin Madow ah oo la diley lacag magdhow ah oo gaareysa 27 malyan oo dollar.
Bishii Luulyo ee sanadkii hore ayaa qoyska Floyd waxa ay dacweeyeen magaalada iyo afarta sarkaal ee booliiska ah ee lagu soo oogay dilkisii bishii May ee la soo dhaafay.
Dacwadda ayaa lagu eedeeyay inay saraakiishu ku xadgudbeen xuquuqda Floyd markii ay xakameeyeen, iyo in magaaladu u oggolaatay dhaqan cunsuriyad ah iyo ciqaab la’aan inay ku dhex faafto booliiskeeda.
“Tani waa dhacdo qoto dheer oo naxdin leh oo, nasiib daro, ay qayb ka tahay qoysas badan oo Madow iyo bunni ah ‘xaqiiqda jirta,” Madaxweyne kuxigeenka Golaha Andrea Jenkins ayaa yiri codeynta kadib, sida laga soo xigtay Minneapolis Star Tribune.
“Ma jiraan wax lacag ah oo badali kara walaal, wiil, abti, aabo, qof aad jeceshahay laakiin waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan sii wadno ka shaqeynta cadaalada iyo sinaanta iyo sinaanta magaalada Minneapolis waana taas tan in la sameeyo, ”Jenkins ayaa ku sii daray.
Heshiiska $27m ayaa sidoo kale waxaa kujira $ 500,000 oo loogu tala galay xaafada laga qabtay Floyd.
Floyd, waa 46 jir madow ah, wuxuu dhintay 25 May kadib markii sarkaalka Derek Chauvin, oo cadaan ahaa, uu jilibka ku qabtay qoortiisa mudo ku dhow sagaal daqiiqo halka Floyd uu ka cataabayay “ma neefsan karo” dadka ka agdhawaa ayaa ka codsaday saraakiisha inay fasaxaan balse, Chauvin oo ay weheliyaan, laba sarkaal oo kale ayaa Floyd dhulka dhigay intii uu katiinadaysnaa.
Dhimashada Floyd waxay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay Minneapolis iyo guud ahaan Mareykanka.
Seddexda sarkaal ee kale ee ku lug lahaa dilkii Floyd, Tou Thao, Thomas Lane iyo J Alexander Kueng ayaa sidoo kale shaqada laga ceyriyay, waxaana la filayaa in maxkamad la soo taago bisha Agosto, iyagoo loo haysto inay gacan siinayeen fal dil ah.